NDỌRỌNDỌRỌ 2023 BUTERE MWAKPO EKWEREMADỤ – MEFỌ – hoo!haa!!
NDỌRỌNDỌRỌ 2023 BUTERE MWAKPO EKWEREMADỤ – MEFỌ
Abụja: Dọkịnta Anụeyiagụ Law Mefọ, onye nlekọta otu Igbo bụ Igbo (IBI) Foundation ekwuola hoo!haa!! na mwakpo ndị otu IPOB wakporo onye bụbu Osote Onyeisi Sineti Naịjiriya, Ọkammụta Ike Ekweremadu bụ maka ndọrọndọrọ ịzọ ọkwa onyeisiala n’afọ 2023.
Nkea bụ oge ọ bụ onye ọbịa na mmemme ụlọ mgbasa ozi NTA bụ Good Morning Nigeria” n’ụtụtụ taa bụ Wenezdee, abalị iri abụọ n’otu nke ọnwa Ọgọọst.
Chetakwa na ndị IPOB nọrọ n’ụbọchị Satọdee gara aga n’obodo Nuremberg dị na mba Jamani were wakpo Ekweremadu oge ọ bịara mmemme Iri Ji ndị Igbo bi na mba ahụ.
Ha nyere nwoke a mmekpa ahụ dị iche iche tinyere ịtụ ya ákwá nakwa ịdọka uwe ya.
Kaosiladi, Ekweremadu mere ihe tụrụ mmadụ nile n’anya site na ịgbaghara ndị a mere ya akaja. Onye kpabuworo udiri agwa a na mbụ bụ Poopu Jọn Pọl nke abụọ, onye gbaghara onye chọrọ igbu ya.
Na mmemme ahụ, ndị ọbụla zitere ozi n’amaozi Twitter katọrọ ya bụ ajọ agwa nke ha sị dịzị ka ọ gosiri na Gọọmenti Etiti Naịjiriya mere ọfụma site na ịmachibido IPOB dịka otu oyi-ọha-egwu.
N’okwu nke ya, Onyeisioche otu Nigerian Diaspora Organization – Europe, Mazị Kenet Gbandị katọrọ ya bụ ihe ndị IPOB mere ma takwaa ndị chịkọbara mmemme ahụ ụta n’emeghi ihe ha kwesịrị ime.
“Ndị chịkọbara mmemme a ka ọ bụ ọrụ ha ịhụ na Ekweremadu bụ onye ọbịa ha nwere nchekwa ziri ezi maka na anyị nile nụrụ kepu kepu banyere ihe ndị IPOB na-akwado ime”
Mefọ, onye nke nwanne ya nwoke, Uche Mefọ bụ osote onyeisi otu IPOB kwuru na ihe IPOB mere bụ arụ ma bụrụkwa amaghị ihe ọma (ingratitude) n’ihi na Ekweremadu bụ otu onye gbara mbọ pụrụ iche maka ịgbapụta onyeisi IPOB, Mazị Nnamdi Kanụ na nga.
Ọ kọwara na onye omebeiwu ahụ degaara Onyeisiala Buhari akwụkwọ ozi megide atụmatụ Egwu Eke.
“Keduzi otu ọ ga-esi gbachaa mbọ a nile bịakwa sorokwa kwado Egwu Eke?”
Mefọ kọwara na ihe mere Nnamdi Kanụ jiri kata obi igbubi ụdọ mmekọrịta dị n’etiti ya n’Ekweremadụ bụ maka nkàtà ana-akpa maka onye Igbo nwere ike ịzọ ọkwa onyeisiala n’afọ 2023.
“Nnamdi Kanụ chọrọ ka a ghara inwe onye nwere isi ga-apụtanwu ịzọ ọkwa onyeisiala ma ọ bụ ikwuchitere Ndigbo na Naịjiriya”
Chetakwa na Mazị Nnamdi Kanụ jiri ọnụ ya kwuo na Redio Biafra na ndị otu ya adịwo njikere ịwakpo ndị ndu Ndigbo ndị ọzọ.
Mefọ, onye nwere nzere mmụta dọkịnta na Nnyocha Akparamagwa (Psychology) kwukwara na ajọ agwa ndị IPOB ahụ nyekwara Ekweremadu aka site na ime ka o doo anya na Ekweremadu esoghị na ndị nkwado otu ahụ.
Kama, ọ sịrị na onye omebeiwu ahụ nyere aka ịgbapụta Kanụ na nga tinyere ịkatọ ogbugbu na mkpagbu nke ndị IPOB agwụla maka na ha bụ ndị Igbo.
N’okwu nke ya, Hon. Abike Dabiri bụ Onyeisi otu Nigerian Diaspora Commission kwukwara mkpa ọ dị na nwa-afọ Naijiria ọbụla batara mba ofesi ọbụla ga ebu ụzọ kpọtụrụ Obi Nnọchiteanya ala anyị na mba ahụ maka adịghị ama ama.
Previous Post: ANAMBARA AKWADOLA ỊKPA EHI IGBO
Next Post: A NWAKWALA ANYỊ! , ỤMAHỊ GWARA NNAMDI KANỤ